'I-100-Midget Matshi' kwi-Universal ekuphenduleni kwi-CGI's Dwarfs ye-Snow White - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'I-100-Midget Matshi' kwi-Universal ekuphenduleni kwi-CGI's Dwarfs ye-Snow White
'I-100-Midget Matshi' kwi-Universal ekuphenduleni kwi-CGI's Dwarfs ye-Snow White
Akunjalo ngokwenene! (Indalo yonke)
Xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwabadlali abaphezulu ababonisa imnyama kwi-Blackface kunye ne-minstrelsy, umdlali omncinci uDanny Woodsburn uthathe ityala I-Snow White kunye noMzingeli kule veki. Ngoku ujoyine iqela elincomekayo leLittle People of America, elithi iinxalenye ezincinci kufuneka ziye kubadlali abancinci.
Kwi Ikhephu elimhlophe , Abadlali abasibhozo- ukusukela kuBob Hoskins ukuya ku-Ian McShane kunye noNick Frost-babenobuso babo kunye namazwi abo adluliselwe ngokwamanani kwimizimba emincinci: abantu abancinci be-CGI. Kuba uninzi lwe I-Snow White kunye noMzingeli Baxhomekeke kwiziphumo ezizodwa, abavelisi babecinga ukuba eli qhinga liza kuba yenye into emangazayo yokuyekisa abaphulaphuli kumgca weqonga lomdlalo bhanyabhanya. (Njengoluhambo olucekeceke lweasidi, yindlela omnye umhlobo ayibeka ngayo.)
Kungcono Isibuko, isipili Usebenzise abantu abancinci abancinci, kubandakanya noMnumzana uWoodburn, umdlali weqonga onendima yokuphinda enze oko Seinfeld .
U-Leah Smith, usekela-mongameli weqela lokukhuthaza abantu abancinci baseMelika, bathethe naye Iposi namhlanje malunga nomcimbi ongekho kangako:
Sikholelwa ekubeni ishishini lezolonwabo, ngakumbi, kufuneka lilahle abantu abancinci kwindima ezinokubakho… Oku kuthetha ukuphosa abantu abancinci kwindima ezazibhalelwe abantu abancinci okanye iindima ezinokuthi zivuleleke kumntu ophakathi-ubude okanye umntu omfutshane.
Ayingabo bodwa abanomsindo. UMat McCarthy, ophethe iBeacher's Madhouse (lonke iqela lemidlalo yeqonga) wasongela Uhambo oluyi-100-midget oluya kwiiofisi ze-Universal kwileta eya kuSihlalo we-Universal u-Adam Fogelson. Banokuba bancinci, kodwa lo mbandela unokuba mkhulu kakhulu ukuba iUniversity ingayihoyi.
Kutheni Iirobhothi Zimhlophe Kangaka? Imiboniso eFundwayo Kukho ubuhlanga
I-MasterChef '5 × 6:' IPanna Cotta Heist '
Ingxaki kaHillary Clinton ngoLungiso lwesiBini
yintoni umoya opheka u-marina abramovic
san diego zoo panda amava
I-curtis lepore kunye no-jessi bayancuma
loluphi olona hlobo lubalaseleyo lokuyila
U-alyssa mastromonaco kunye nodavid krone
ipeni efanelekileyo yevape yeekhatriji zeoyile
UNkosana uWilliam wayefunde phi